Plum jam - yechinyakare uye ZVAKANAKA RICH recipe | ThermoRecipes
Gadzirira izvi jam inonaka Plum iri kuve chiitiko chegore rega chisingakwanise kupotsa pakarenda yangu.
Pakupera kwaJuly, tinogara tichiunganidza iyo plums dzinonaka uyo une muti wedu wechikoro. Gore rino, uyezve, ranga richinyanya kunakidza sezvo vana vedu nevamwe vana vechikoro vakabatana muunganidzwa, avo vakapopota kwandiri kuti ndivakande kubva pamusoro pemuti: more plums !!!
Saka, nechigadzirwa chakasikwa zvakadaro, haungapotse kugadzira chinonaka cheplamu jamu. Ndiyo nzira yakanakisa yeku kukwanisa kunakirwa nechibereko ichi gore rese.
Uye zvechokwadi, kuendeswa kwemuenzaniso mudiki kunhengo dzemhuri yangu, kuti vagone kufarira kuravira kwaro.
Nzira inonaka yekunakirwa neplums gore rese.
Nguva yakazara: 25M
600 g yero plamu
1 ndimu yakasvuurwa
Isu tinosvuura iyo plums, ini ndinowanzo siya ganda pane mamwe acho, bvisa mapfupa ndokuisa mugirazi.
Wedzera iyo peeled lemon uye kupwanya 15 masekondi, inofambira mberi kumhanya 5 -7-10
Isu tinowedzera shuga uye chirongwa Maminetsi manomwe, tembiricha yevaroma, kumhanya 25. Isu tinobvisa mukombe uye toisa dengu kusimudzira kubuda kwemhepo.
Pakupedzisira tinotarisa kuti kuenderana kwacho kwakati rebei, kana zvisiri, tinoisa mamwe maminetsi mashoma, asi hatifanire kukanganwa kuti kana kuchitonhora kuchakura zvishoma.
Isu tinoiisa mune mamwe magirazi egirazi uye regai itonhore zvakakwana kunyatso rongedza iwo.
Kunyangwe hazvo mabhuku achiwanzo kurudzira kumhanya 2, isu tinosarudza kumisikidza kumhanya padiki kuti tidzivise kuputika, kubuda nekukurumidza nekukora zvirinani.
Mamwe mashoko - Plum jam keke
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Nyore, Asingasviki 1 awa, Jams uye inochengetedza, Desserts
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Celiac » Plum jam
Ini ndiri mutsva kune izvi, ndinokutendai zvikuru nezveresipi yenyu, plamu jamu, ndanga ndichiedza kuiwana kwenguva yakareba uye nhasi ndazoiwana. Pakutanga yakabuda yakanyorova, kudzamara pfungwa yakandishandira uye mushure mekuverenga kwakawanda ndakazoona kuti ganda rine pectin yakawanda, izvi zvinoita kuti rinyanye zvakanyanya. Chinondishamisa huwandu hweshuga yawakaisa, handiti vanoti shuga ndeyekuchengetedza? Ndatenda zvikuru nezano renyu uye ndinovimba muchapindura email yangu. Kutsvoda
Mhoro Merche, shuga ndeyokupa kutapira kwakakodzera kwejamu uye inoshandawo seyakafuta. Jamu dzese dzinoitwa nekubika muchero neshuga kudzamara vawana chiyero chakaringana chejamu. Ndinovimba unozvifarira. Shuwiro yakanakisa.
Saka Elena anofanirwa kuvabvarura kana kwete ... ini ndangoverenga kuti Meche ane mvura chaizvo ... iwe uchandiudza ... kutsvoda.
Nuria, ini ndinowanzo bvisa ganda uye kana pakupedzisira iwe ukaona chimwe chinhu chemvura, unogona kuchiisa kwemamwe maminetsi mashoma pasina beaker.
Chero kusahadzika ... Iyo 600gr iri pamwe nebhonzo? Iyo zvakare tsvuku plamu? Zvingave zvakaenzana neshuga here? Vacuum yakarongedzwa inotora nguva yakareba sei? Izvo zvataisazofanira kuchengeta mufiriji? Ndatokupa rimwe basa ... Maita basa
Iyo plums inoyerwa pasina gomba. Kana uchikwanisa kuzviita ne red plum, hapana dambudziko uye huwandu hweshuga hwakafanana. Vacuum yakarongedzwa inogona kugara iwe usina kuvhurwa kwemwedzi mitanhatu uye haidi kuve mufiriji asi kana ukaivhura unofanirwa kuiisa mufiriji uye inogara kwemwedzi yakati wandei.
Ini ndakagadzira iyo plum jam uye ndakaifarira zvakanyanya, asi ini ndoda kuziva kuti inotora nguva yakareba sei ikangoputirwa isina kuvhurwa, mune girazi chirongo? Unofanirwa kuipfuudza kuburikidza nemvura yekugezera? Unorevei kana unoti hauna chinhu?
Kana iwe uchizadza zvirongo nejamu inopisa, unoivhara mushe uye woisiya yakakwenenzverwa pasi kwemaawa makumi maviri nemana uye nenzira iyi vharuvhu inogadzirwa uye inogara yakavharwa kweinosvika mwedzi mitanhatu uye kuvhura mufriji kweanenge ivo.
Ini ndangoona iyo plamu jamu yandakagadzira neresipi yako uye ini ndangoona kuti yakazoita kunge quince paste: mubhokisi, ingavhenekerwa sei zvishoma?
Kutenda mapeche ako zvinoita kuti zvese zvive nyore zvishoma
Wedzera mvura woiisa maminetsi mashoma kusvikira yawedzera kuyerera.
Asi izvo zvinoitwa kumberi kana mushure mekunge kwatonhora?
Jamu rainaka !!! Ini, ndine makore gumi nerimwe, ndakafadza amai vangu, vaive muhofisi !!! Ndatenda
Mhoro Sofia, ndinofunga iwe unoreva kuti haina kunyanyisa kukora, handiti? Iwe unofanirwa kuzviita isati yatonhora. Wakafadza nekufadza amai vako! Chokwadi zvakabuda mu10. Maita basa nekutitevera uye nekutisiira makomenti.
Maribel SM akadaro
Hapana mhosva, "embasar" inofanira kugadziriswa ne "packaging" (kubva "container"), sezvo yakashata zvikuru pakuverenga resipi. Uye zvino tinoenda nejamu…. Shuwiro yakanakisa.
Pindura Maribel SM
Ndatenda zvikuru Maribel. Isu tatozvigadzirisa.
Uchatitaurira kuti jamu rinotaridzika sei pauri 😉
Yakagadziriswa Maribel !!
Dzimwe nguva tinorasikirwa neminwe yedu ... uye kunyangwe misoro yedu! 😉
Vachaziva ikozvino akadaro
Ndiri kutarisira kugadzira jam iri. Vakandipa 2kg. Claudia plum, mamwe akasvibira uye mamwe akaibva. Huwandu hweshuga hwakaenzana. Ndinogona here kusanganisa iyo yakaibva neyakasvibira?
Pindura Sabrán ora
Hongu, unogona kusanganisa iwo egirini neaya akaibva. Uye iwe unogona zvakare kugadzirisa huwandu hweshuga zvishoma (kana iwe uchifunga kuti anotapira kwazvo, wedzera shuga shoma, inozove zvakare yakapfuma uye uchawana jam ine mashoma macalorie.
Mhoroi, mangwana ndichagadzira recipe yako, asi ndine mubvunzo uye ndewekuti mune yekubika iwe unoti iwe unofanirwa kurega jam riitonhorere mukati memidziyo, uye mune imwe komendi iwe unoti iwe unofanira kuzvivhara neanopisa jam ... zvichave zvezvinhu zvakasiyana here? Ndatenda!!!!!!
Kuchengetedza iyo jamu zvakafanira kuidurura yakananga kubva pagirazi re thermomix, ndokuti, inopisa kwazvo muchirongo, izadze kumusoro, uvhare zvakanaka, isa iri kumusoro uye rega itonhorere. Saka iwe unenge uine vacuum yakazara mitsara yejamu inogara iwe kwemwedzi 🙂
Mhoroi, ini ndaita, sekureva kweiyo nzira uye yatsva, zvishoma, mugirazi.
Iyo yandakakwanisa kutora mukana, yanga isingakwanise kushandisa, yakaoma kupfuura dai yaive quinces.Kuna chero munhu anoziva, nei iri nekuti inotsva uye nei yakaramba isingakwanisike kushandisa?
Kusvotwa kupi kuti haina kukodzera iwe ... 🙁
Izvo zvinongoitika kwandiri kuti zvaikonzerwa nemhando dzakasiyana dzeplum yakashandiswa ... Kune inotevera, ronga shoma nguva uye wedzera maminetsi kusvika iwe wawana ukobvu hwaunoda.
Kana iri lidl rekicheni robhoti, rakagadzirirwa zvakafanana neiyo thermomix?
Keke yeSan Marcos ine toasted zai yolk